Jamaahiirta Manchester United oo dalbaday in Ganaax adag lasaaro Pep Guardiola? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Published on February 22, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(22-2-2018) Jamaahiirta kooxda kubada cagta ee Manchester United ayaa aaminasan in Pep Guardiola uu u qalmo ganaax kadib markii uu dagaal afka ah dhexmaray isaga iyo tababaraha kooxda Wigan ee Paul Cook.
Kooxda Wigan Atletic ayaa ceel ku riday rajadii Manchester City ay ka qabtay ku guuleysiga FA Cup-ka, kadib markii kooxda ku ciyaarta Etihad loogu awood sheegtay gool madi ah oo uu ciyaariyahan Will Grigg ka dhaliyay dabaayaqdii kulankaasi.
Casaan qeybtii hore ee kulanka loo taagay xidiga lagu magacaabo Fabian Delph ayaa dhaliyay muran xoogan oo dhexmaray labada tababare inkastoo murankooda uusan saameyn ku yeelan go’aankii garsoorka.
Guardiola iyo Cook ayaa wadaagay daqiiqad muran ah oo gacan qaad ku dhawaatay, laakiin tababaraha Manchester City ayaa sheegay in wax dhibaato ah aysan dhicin isla markaana ay Goor danbe ka heshiiyeen wixii dhacay Macalinka Kooxda Wigan.
Mar warfidiyeenku Guardiola ay weydiyeen gudaha Tunnel-ka ayuu ku jawaabay hadalo kul kulul isagoo cadeeyay in aysan waxba dhicin isla markaana ka codsaday warfidiyeenka in ay su’aalaha sii wataan”
Xili Guardiola uu isku dayay in uu biyo qaboow ku shubo sheekada dhexmartay iyo tababaraha Wigan, ayaa jamaahiirta Manchester United waxay dalbadeen in Guardiola ganaax garka loo galiyo maadaama sida ay ku doodayaan uu Carqaladaeeyey hab sami u socodkii Cayaarta.
Jose Mourinho ayaa ganaax hal kulan ah la saaray kadib markii uu laaday caag biyaha laga cabo oo diilinta garoonka yaalay bishii November, taageerayaasha Red Devills oo tusaale ka dhiganaya ganaaxii Mourinho ayaa FA-ga England ugu baaqay in ay ka fariistaan ganaax dusha looga tuuro Tababaraha Manchester City.